FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA FRENCHIE PUG - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Frenchie Pug
Alika mpihetsiketsika Bulldog / Pug frantsay mifangaro
Halatra ny taranaka faharoa Frenchie Pug amin'ny faha-6 volana— 'Izy dia tena marani-tsaina, malemy paika, voaofana mora foana, manana ny toetran'ny clownish an'ny Bulldog frantsay, ary ny toetran'ny Pug. Azo antoka fa manana ny lokon'ny Frenchie, ny marika ary ny sofina 'ramanavy izy, saingy nahavita nahazo ny lohan'i Pug kely kokoa, ny vatana sy ny rambony lava kokoa (saingy tsy nivadika !!). Azo antoka fa olo-malaza eo an-toerana ao San Francisco sy ny Alamo Square Park izy. '
Ny alika Frenchie dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Bulldog frantsay ary ny Pug . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Mpanoratra International Canine Registry®= Frenchie Pug (Frug)
Ny firaketana ny firaketana endrika = Frenchie Pug
Banx the Frenchie Pug mainty (French Bulldog / Pug mix) toy ny alika kely amin'ny 8 volana eo amin'ny seza fiaran'ny alika— 'Banx dia lehilahy be fitiavana sy sosialy. Tiany ny milalao daty miaraka amin'ny sakaizany Ginger izay a Corgi . Milalao mandritra ny ora maro izy ireo manenjika ny filalaovana ady sy tolona. Banx dia mpiambina ary tia miaraka amiko. Fanomezana inona izany, fitahiana marina. xoxo '
Ottis ilay brindle Frenchie Pug eo amin'ny 10 volana eo ho eo— 'Alika mahafinaritra sy be fitiavana izy. Izy no fanomezana fitsingerenan'ny andro nahaterahana tsara indrindra ho ahy. Heveriny fa alika mpiambina ihany koa izy, saingy manafana haingana an'ireo vahiny dia hidoroka oroka mihitsy raha azony atao. ' 5
amerikana eskimo shiba inu mix
'Ziggy, ny Frenchie Pug anay 9 volana dia manana toetra tsara ary mifanerasera amin'izay olona mifanena aminy. Tiany ny mandeha rollerblading ary mihazakazaka toy ny lehilahy dia miaraka amin'ny alika hafa ao amin'ny valan-javaboary, fa ny zavatra tiany indrindra dia ny mihinana sy matory. Rehefa lany izy dia mitroka mafy be, ary tsy misy mamoha azy. '
Reggie the brindle Frenchie Pug amin'ny 1 taona— 'Izy no zavatra mamy indrindra hatramin'izay, mitaky ny fitiavako sy ny saiko, kanefa manao izany am-panajana izy. Tena be fandavan-tena izy, ary tsy nahazo na dia indray mitete aza. tena alika mahay mandanjalanja . Tena hendry koa. '
kilalao fox terrier jack russell mix
Reggie ilay brindle Frenchie Pug amin'ny 1 taona
Reggie ilay brindle Frenchie Pug amin'ny taona 1 maka hatory miaraka aminy saka sakaiza.
Keagan the brindle Frenchie Pug tamin'ny faha-8 volana - Pug ny reniny, Bulldog Francesa ny rainy.
Alaharo ny alika zanak'ondry Frenchie Pug fotsy sy mainty amin'ny faha-4 volana
Alaharo ny alika zanak'alika Frenchie Pug fotsy sy mainty amin'ny taona faharoa mandry amin'ny farafara.
Bruxelles griffon sy Shih Tzu Mix
alika kely mpanao ady totohondry 4 volana
pitbull sy shar pei mix
Dane mahafinaritra 1 taona
tondro fohy fohy alemana volontany rehetra